bobo bobo – GENERATION WAVE
October 8, 2011 | Filed under | Posted by gwave Shortlink: Posted by gwave on October 8, 2011. Filed under .
You can leavearesponse or trackback to this entry	LeaveaResponse Cancel reply
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းအသံလွှင်အစီအစဉ်
ပါကစ္စတန်လေယာဉ်ပေါ်ပါ လူနှစ်ယောက် ဗြိတိန်ဖမ်းဆီးလုံခြုံရေးဆွေးနွေးဖို့ ၀န်ကြီးကယ်ရီ အာဖရိကရောက်၂၀၁၂ မှာရှာတွေ့တဲ့ မျိုးစိတ်သစ်များနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ဆီးရီးယားတက်မည်ပြဿနာကိုဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ မြောက်ကိုရီးယားလိုလားဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်စတင်သမ္မတအိုဘားမား စစ်တက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြောဂျပန်-ထိုင်း လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်မြန်မာရှိ အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာများတင်ဖို့ ရက်သတ်မှတ်မြန်မာသံရုံးတိုက်ခိုက်ဖို့သံသယရှိသူနောက်ထပ် ၂ ဦး အင်ဒိုရဲဖမ်းဆီး
အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေ လူ့အခွင့်အရေး လိုက်နာဖို့ HRW တိုက်တွန်းလူ့အခွင့်အရေး ဆွေးနွေးပွဲ မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကို တင်ပြဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များ မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်ရှိလဝက ဝန်ထမ်းများကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သူများ စစ်တွေတရားရုံးမှာ အမှုစစ်ဆေးသိမ်းထားတဲ့မြေတွေ ပြန်စစ်ဆေး မှု အင်တောဒေသခံတွေကြား မကျေနပ်ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေး ဆွေးနွေးသိမ်းယူထားတဲ့ လယ်မြေတွေပေါ် ထွန်ယက်တဲ့ တောင်သူတွေကို အာဏာပိုင်များဖမ်းဆီးစက်ရုံ သပိတ်ခေါင်းဆောင်များ ရဲဖက်မှခေါ်ယူ သတိပေးခံရပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ညီလာခံကျင်းပရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေး နှိုးဆော်သူများ အစည်းအဝေးကျင်းပ
အင်တောမြို့နယ်က စစ်တပ်သိမ်း လယ်မြေများ (ရုပ်သံ)မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၄-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)အခြေခံလူတန်းစားများ၏ ကလေးများ ပညာသင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်သံ)မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၄-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)စက်မှုဇုန်အလုပ်သမား ဆန္ဒပြပွဲများ (ရုပ်သံ)မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၃-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)မလက်တို လယ်သမားများ ဘ၀ (ရုပ်သံ)မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၃-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေလ ၂၁ ရက် လွှတ်တော် ပရိဝုဏ်ထဲမှာ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြောကြားမှု ကောက်နှုတ်ချက် (ရုပ်သံ)မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၂-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
All right reserved Generation Wave	Technical supported by Burma\_'s iCon Media Network